Yesaia 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Etiopia ho atemmusɛm (1-7)
18 Due! Asaase a wɔte ntuboa ntaban nnyigyei wɔ so,Asaase a ɛwɔ Etiopia nsubɔnten ho.+ 2 Ɛsoma nkurɔfo* fa po so,Ɛma wɔde ahyɛn a wɔde mmɛw* ayɛ fa nsu so, na ɛka sɛ: “Monkɔ, asomafo* a mo ho yɛ hare,Monkɔ ɔman a emufo yɛ atenten na wɔn ho yɛ tromtrom no nkyɛn,Monkɔ nnipa a wosuro wɔn wɔ baabiara no nkyɛn,+Monkɔ ɔman a wɔn ho yɛ den na wɔredi nkonim* no nkyɛn,Ɔman a nsubɔnten ahohoro wɔn asaase no.” 3 Mo a mote wiase ne mo a mote asaase so nyinaa,Nea mubehu no bɛyɛ te sɛ ahyɛnsode* a wɔde asi mmepɔw so,Na mobɛte nne bi te sɛ nea wɔrebɔ abɛn. 4 Nea Yehowa aka akyerɛ me ni: “Mɛyɛ komm na mahwɛ m’atenae,*Te sɛ awia ketee ne emu ahohuru,Te sɛ obosu mununkum wɔ twabere mu ahohuru mu. 5 Ansa na twabere bedu no,Sɛ nhwiren gu wie na bobe no gyigye a,Wɔde kantankrankyi* betwitwa nea afefɛw wɔ ho no,Na wɔatwitwa ɛho nhama atow agu. 6 Wobegyaw wɔn afunu nyinaa ama mpeteNe asaase so mmoa. Mpete bɛtena wɔn nam ho ahohuru bere,Na asaase so mmoa nyinaa atena ho twabere. 7 Saa bere no, wɔde akyɛde bɛbrɛ asafo Yehowa.Wɔde befi ɔman a emufo yɛ atenten na wɔn ho yɛ tromtrom no nkyɛn,Nnipa a wosuro wɔn wɔ baabiara no,Ɔman a wɔn ho yɛ den na wɔredi nkonim no,*Ɔman a nsubɔnten ahohoro wɔn asaase no.Na wɔde bɛba baabi a asafo Yehowa din wɔ, Sion Bepɔw so.”+
^ Anaa “abɔfo.”
^ Anaa “ɔman twintwann a otiatia aman so.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Mɛyɛ komm na mafi m’atenae ahwɛ.”